Qulquli Video Local in TV for Windows / PC / Android / iPhone / iPad
Hel hoos ku app liiska faahfaahsan Chromecast. Waxay kuu sheegaysaa sida loo sii qulquli files deegaanka si ay TV dhex Chromecast ka PC, Mac, Android, ama iPhone, iPad iyo in ka badan. Hadda Google ku tuureen taageeray qaabab video waxay ku kooban MP4 iyo WebM. Haddii aad qabto arrinta qaab incompatibility ah, isticmaal uun Video Converter si loogu badalo aad video in la taageero by Chrome.
Qulquli video deegaanka ka PC / Mac
Stream ka Android / iPhone / iPad kaydinta
Si aad u sii qulquli files deegaanka si ay TV ka PC ama Mac, waxaa jira gebi ahaanba 4 siyaabood oo uu ka soo xusho. Just heli 4 xal hoos ku qoran.
Xalka 1: tuur Chrome browser in TV
Xalka 2: tuur la Wondershare Video Converter
Xalka 3: tuur la Plex u Chromecast
Xalka 4: tuur la Videostream u Google Chromecast
Tallaabada 1. Ku rakib browser Chrome iyo Chromecast kordhin
Hubi in aad qabto nooca ugu dambeeya ee Chrome. Waxaad ka eegi kartaa adigoo gujinaya Settings> Ku Saabsan Google Chrome si aad u cusboonaysiiso chrome.
Talaabada 2: Isku Chromecast la TV
Bareesada in Chromecast in aqbasho HDMI ku qoran TV, ka dibna furaysto xadhig USB ku darafka kale Chromecast si ay u korontada.
Tallaabada WiFi 3.Connect
Hubi in aad computer iyo TV ku xiran yihiin oo ka tirsan shabakadda isku mid ah. Waa in aad la xiran 2.4 GHz network Wi-Fi 802,11 b / g / n Wi-Fi.
Haddii aad Chromecast aan la xiran kartaa shabakadda Wi-Fi, fadlan hubi router waafaqsan Chromecast ee halkan .
Tallaabada kordhin la shubay 4.Install Google
Fadlan kala soo bixi kordhin la shubay Google halkan . Ka dib markii la rakibey, waxaa jiri doona tab tuur browser Chrome ah. Waxaad riix kartaa button doorasho u dhigay tayada video sida ba'an (bitrate sare 720p) ama High (720p) si aad u HD TV.
Tallaabada 5. Play Video ama music deegaanka
Jiid aad files deegaanka si ay browser chrome, ama jaraa'id CTR + O si ay caleenta iyo dajiyaan faylasha aad. Markaas aad video lagu ciyaari doonaa Chrome ee la dhisay-in video siladda. Markaas riix tab hadda ku tuur biraawsarkaaga inay sii qulquli files warbaahinta in Chromecast ka dibna u ciyaaro TV.
Sidoo kale waxaad dooran kartaa tuur screen oo dhan si aad ula wadaagto screen desktop halkii tab Chrome ah in TV.
1. Haddii aad videos aan la huleeshay karaa, taasi waa sababta oo ah Chromecast ma taageeri qaabab kuwaas. Waxaad ka eegi kartaa dhammaan warbaahinta taageeray HALKAN . Haddii aad dhabtii doonaysid in tuuray qaab kasta, hubi xal labaad.
2. Stream video ee asalka: Marka aad sii qulquli video in aad TV, waxaad isticmaali kartaa 2 Windows-gaaban si ay u sii qulquli video deegaanka si ay Chromecast ee asalka.
Alt + Tab: Waxay kuu ogolaanaysaa inaad wax kale samayn wareegaya kale furay barnaamijyada / barnaamijyadooda
Ctrl + ESC: Waxaad bilaabi kartaa barnaamij cusub oo riixaya 2 badhamada in ay arbushin ilaa menu Star ee.
Tallaabada 1. Ku rakib Wondershare Video Converter
Riix badhanka cagaaran hoose si aad u dejisan iyo rakibi Wondershare Video Converter.
Tallaabada 2. Import kasta video in software
Hubi in Chromecast iyo PC ku yaalaan shabakad isku mid ah. Markaas riix "Add Files" button ama si toos ah jiidi-n-dhibic si ay u dajiyaan aad video barnaamijka. Ka dib markii in, riix "Stream" Murayaad guriga dhankiisa midigta oo aad ku doorato Chromecast sida qalab geeyo ah. Markii wax walba waa diyaar, dhufatey "Stream" badhanka hoose.
Tallaabada 3. Start geeyo
Daaqadda pop up ka, riix "Play To TV" button in durduri video in Chromecast. Markaas dhowr ilbiriqsi ka dib, waxaad ku raaxeysan kartaa video xaq shaashadda weyn. Waxa kale oo aad xakamayn kartid habka loo maqli karo adigoo gujinaya badhamada eego suuqa kala geeyo ah. Taasi waxa ay samaysay!
Plex waa app Chromecast ah PC, Mac iyo Linux. Waxaa loo qorsheeyay in qulquli videos oo macmal ah iyo filimada maxalliga ah si ay TV xagga Chromecast. Si aad u isticmaasho app, waxaad u baahan tahay inaad qori PlexPass iyo bixiyo $4.99 u app Plex. Ka dib markii ay wax walba waa la diyaariyey, kaliya ku dhuftay ciyaarta oo ka jaftaa badhanka Chromecast ah, ka dibna aad videos degaanka waxaa si guul leh huleeshay karaa in aad TV. Waxa ay taageertaa MP4 iyo WebM.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Sida loo isticmaalo Plex u Chromecast .
Videostream u Google Chromecast waa kordhin Chrome lacag la'aan ah. Si aad u rakibto, version of Chrome 32,0 ayaa loo baahan yahay. Waxaad u isticmaali kartaa si lacag la'aan ah ka ciyaari videos deegaanka on Chromecast ka PC - subtitles taageeray! Qaab ay taageerayaan waa MP4 iyo WebM
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Videostream u Google Chromecast .
Si aad u tuuray deegaanka videos in TV u iPhone / iPad / qalabka Android, halkan waxaan ku talinaynaa in la soo dajiyo soo socda Chine Chromecast qalabka Android iyo macruufka ee hoose.
The barnaamijyadooda hoos ku taageero MP4 iyo WebM.
Waxaa app for Android / iPhone / iPad
Waxaa App u Android / iPhone / iPad
Taageerayaan Qalabka Mobile
iPhone / iPad / iPod taabashada $ 5
Avia u Chromecast
Casriga ah Android / kiniin ah (Android 2.3 iyo ka kor)
2012 nooc oo ka huriyaan dab HD 7 "
8.9 "kiniinno $2.99
Qalab Android $4.69
Casiirka u Chromecast
Qalab Android More Info $2.99
Qalab Android FREE
Plex u Chromecast
macruufka / Android
iPhone / iPad / iPod taabashada More Info Free
> Resource > Video > Sida loo sii qulquli Video Local in Chromecast ka Windows / Mac / Android / macruufka